Iindaba eziNyaniso zeBakhenkethi beeNkqubela kunye namaMashini
Iimashini zexesha zifumaneke kuphela kwiimvumi, kodwa abaninzi abantu baye bafumana iziganeko ezingachazwanga ezibonakala ngathi zisesigxina kodwa zenzeke ngokukhawuleza kwixesha elidlulileyo nelizayo.
Yiyiphi umhla oya kuhamba xa uhamba ngexesha? Lo mbuzo abantu baye bahlala becamngca ngokucinga-amathuba anqabileyo kakhulu kunye nemihlali. Ngaba ubuya kujonga iipiramidi zaseYiputa?
Joyina umboniso weqhawe lokulwa kwi-Roman Coliseum? Thatha umboniso weedinosaurs zangempela? Okanye ngaba unqwenela ukubona oko ikusasa elibambelele kuluntu?
Ezi ngcamango ziye zaphazamisa impumelelo yamabali afana ne-HG Welles ' Ixesha lexesha, amaFilimu abuyele kwixesha elizayo, iziqephu ezithandwayo ze "Star Trek" kunye neencwadana zezesayensi ezingenakubalwa.
Yaye nangona ezinye izazinzulu zicinga ukuba mhlawumbi kunokwenzeka ukuba zihambe ngexesha, akukho mntu (njengoko sifanayo) ucebile indlela yokwenza ukuba kwenzeke. Kodwa oko akuthethi ukuba abantu abazange bavakalise ukuhamba ngexesha. Kukho ama-anecdotes amaninzi atshabalalayo avela kulabo abathi babonakala bekhange bangakhange bavakatyeke - ukuba nje ngokufutshane - elinye ixesha kunye, ngamanye amaxesha, kwenye indawo. Ezi ziganeko, ezibizwa ngokuba ngamaxesha , zibonakala zenzeke ngokukhawuleza kwaye zenzeke ngokukhawuleza. Abo bafumana ezi ziganeko badla ngokuphazamiseka kwaye badideke yiloo nto abayibonayo kwaye bayayiva, kwaye emva koko belahlekelwa ngokupheleleyo ukuyichaza.
Iimeko zexesha lokuhamba
Uhambo oluya kwixesha elizayo
Ngomnyaka we-1935, uMaha Marshal uSir Victor Goddard waseBrithani Royal Air Force wayenamava amanxeba kwi-Hawker Hart biplane. U-Goddard wayengumlawuli weWing ngexesha ngeli xesha xa ebalekela e-Edinburgh, eScotland waya e-Andover, eNgilani, wagqiba kwelokuhamba nge-airfield elahliwe eDrem, kungekude nase-Edinburgh .
Inqwelo-moya engenamsebenzi yayinamagqabi, ama-hangars ayewahlula kwaye iinkomo zidla apho iiplani zazibekwe khona. U-Goddard waqhubeka ebalekela e-Andover, kodwa wahlangana nesiqhwithi esinqabileyo. Kwimimoya ephakamileyo yamaqhwithi anqabileyo obomvu obomvu, walahlekelwa yintambo yakhe, eyaqala ukujikeleza emhlabathini. Ngokukhawuleza ukuphazamisa ukuphahlazeka, i-Goddard yabona ukuba indiza yakhe yayibuyela kwi-Drem.
Njengoko esondela kwi-airfield yakudala, isiqhwithi saqhaqhafaza kwaye i-Goddard iplanethi yayibhaqa ngokukhanya kwelanga. Ngeli xesha, njengoko ehamba phezu kwe-airfield yaseDrem, ibonakala ihluke ngokupheleleyo. Ama-hangars abukeka ngathi atsha. Kwakukho iindiza ezine emhlabathini: zintathu zazingamaqhekeza aqhelekileyo, kodwa zenziwe ngezophuzi ezingaqhelekanga; Iyesine yayiyi-monoplane, leyo i-RAF eyayingazange ibe nayo ngo-1935. I-mechanics yayigqoke iingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka, i-Goddard eyayicinga ukuba iyinqaba ukusuka kuyo yonke i-mechanical RAF egqoke iimboli ezibomvu. Namaqhinga, nokuba, akukho mnye umatshini obonakala ebona ukuba aqhube. Ukushiya loo ndawo, waphinda wadibana nesiqhwithi, kodwa wakwazi ukubuyela eAndover.
Kwaye kwafika ngowe-1939 ukuba i-RAF yaqala ukupenda iindiza zabo eziphuzi, zaza zenza i-monoplane yohlobo olubonwa ngu-Goddard, kwaye iifom ye-mechanics yatshintshelwa eluhlaza.
Ngaba i-Goddard yayiphumelela iminyaka emine kwixesha elizayo, yabuyela ngexesha lakhe?
Ufunyenwe kwiVortex yesikhashana
UDkt. Raul Rios Centeno, ugqirha kunye nophandi we-paranormal, uxelelwa kumbhali uScott Corrales ibali elitshilwa kuye esinye sezigulane zakhe, umfazi oneminyaka engama-30 ubudala, owafika kuye enecala elibi le-hemiplegia - ukukhubazeka ngokupheleleyo kwelinye icala lomzimba wakhe.
"Ndaye kwindawo yeenkampu kufuphi noMarkahuasi," wamxelela. UMarkahuasi yihlathi elidumiweyo eliqhelekileyo eliqhelekileyo malunga neekhilomitha ezili-35 empuma yeLima, ePeru. "Ndaphuma ndihlola ukuhlwa ebusuku kunye nabahlobo abathile. Kulungile, sasiva iintlobo zomculo kwaye saqaphela ibhokisi elitye elitye elikhanyayo. Ndakwazi ukubona abantu bedansa ngaphakathi, kodwa xa ndandisondela ndandiva ngathi kubanda apho ndandiyinyamekela khona, kwaye ndazinamathela intloko yam emnyango ovulekile.
Ngaloo nto ndabona ukuba abahlali bahlanjwe ngefestile ye-17. Ndazama ukungena egumbini, kodwa enye yam intombazana yam yandichukumisa. "
Kwakuloo mzuzu ukuba isiqingatha somzimba wesifazane saphelelwa amandla. Ngaba kwakungenxa yokuba umngane womfazi wamkhwelisa ngaphandle kwekhiteni yecala xa wayesiqingatha angene kuyo? Ingaba isigamu sakhe umzimba sibanjwe kwinqanaba elithile le-vortex okanye umnyango? UDkt. Centeno wabika ukuba "i-EEG yakwazi ukubonisa ukuba i-hemisphere yengqondo engasekhohlo ayizange ibonise iimpawu zokusebenza ngokuqhelekileyo, kunye nexabiso elingaqhelekanga lamagesi kagesi." (Jonga ubukhulu obungaphezulu kweeNkcukacha zethu ngeenkcukacha ezininzi kweli bali.)
Umgwaqo omkhulu ukuya kwixesha elidlulileyo
Ngo-Oktobha 1969, indoda echongwe nje ngokuba nguLC kunye nomhlobo wakhe wezoshishino, uCharlie, babehamba ngokusuka enyakatho esuka e-Abbeville, eLouisana baya eLafayette kwi-Highway 167. Njengoko beqhuba ngeendlela ezingenanto, baqala ukufumana into ebonakala imoto iyahamba ngokukhawuleza. Amadoda amabini agxininiswa yimeko yempahla yeemoto ezineminyaka engama-30 ubudala-ibonakala iyintsha-kwaye yadideka yi-plate yelayisenisi yayo evulekileyo ye-orange eyayisitampu kuphela "ngo-1940." Noko ke, bacinga ukuba imoto yayiyinxalenye ye-antic auto show.
Njengoko bahamba ngesithuthi esicothayo, baye banciphisa imoto yabo ukuba bajonge kakuhle imodeli endala. Umqhubi wemoto endala wayeyindoda ebhinqa igqoke iingubo ze-1940 zokuvuna, kwaye umgibeli wakhe wayengumntwana omncinci naye ogqoke. Eli bhinqa lalibonakala lixakekile kwaye lididekile. ULC wabuza ukuba ufuna uncedo kwaye, ngefestile ehlanganisiwe, ibonise "yebo." LC
wammisela ukuba ahambe ecaleni kwendlela. Amashishini athengisa imoto emdala aze aphendule emagxeni endlela.
Xa bephuma ... imoto endala yayiphelile ngaphandle komkhondo. Kwakungabikho i-turnoffs okanye nayiphi na enye enye inqwelo inokwenzeka. Emva kweminye imva, enye imoto yakhwela kubantu abashishini kwaye, ididekile, yathi ibonile imoto yabo isuka kwicala ... kwaye imoto endala yaphela yaphela. (Jonga uMhambi wexesha ukufumana iinkcukacha ezininzi kweli bali.)
Ngobunye ubusuku ngo-1972, iindleko ezine ezivela kwiYunivesithi yase-Southern Utah zazibuyela kwi-dorm yazo eCedar City emva kokuchitha usuku e-rodeo e-Pioche, e-Nevada. Kwaba malunga ne-10 ntambama kwaye amantombazana ayezimisele ukubuyela kwindawo yabo yokulala ngaphambi kokufika kwexesha. Bahamba ngeNdlela ehamba phambili 56, eyaziwa ngokuba "yintlanzi."
Ngexeshana emva kokuthatha imfoloko endleleni ephendukele ngasenyakatho, amantombazana ayamangaliswa ukubona ukuba i-asphalt emnyama ibe yindlela yommhlophe omhlophe ekugqibeleni yaphela ngokukhawuleza kwintlanzi. Bajika baza bazama ukufumana indlela yabo yokubuyela emgwaqweni omkhulu, kodwa kungekudala baxhalabele ngeendawo ezingaqhelekanga - izindonga ezibomvu ze-canyon eziye zavula indlela yokuvula imifuno yemifuno kunye nemithi yephayini, engakaze ihlangabezane nayo ngaphambili kweli candelo lombuso .
Ukuziva belahlekile ngokupheleleyo, loo nto mbazana yayiduduzeka xa beya kwindlela ehamba kuyo. Baye bangena kwindawo yokupaka kwaye omnye wabagibeli wayiguqa ikhanda lakhe ewindow ukuze athole izikhokelo ezivela kumbalwa "amadoda" avela kwisakhiwo.
Kodwa wamemeza waza wayala umqhubi ukuba aphume apho-ngokukhawuleza. Amantombazana ahamba, kodwa aqonda ukuba axoshwa ngamadoda angaqhelekanga, ahamba ngamavili, aneenqwelo ezinjengamaqanda. Ukukhawuleza kwakhona nge-canyon, iintombazana zazibonakala zilahlekelwe ngabazingeli babo kwaye zafumanisa indlela yazo eya kwintlango eyaziwayo. Isizathu sokumemeza? Amadoda, wathi, ayengabantu. (Jonga i-Utah's Time / Space Warp Canyon Ukudibanisa ukuze uthole iinkcukacha ezingaphezulu.)
Ixesha leWindows Warp
Amabini amabini aseBrithani abeshaya e-ntshona yeFransi ngo-1979 babeqhuba, befuna indawo yokuhlala ngalo busuku. Ngandlela-thile, bahlaselwa yimpawu ezithile ezabonakala ngathi zisekreksi endala kakhulu. Isakhiwo sokuqala beza kubonakala ngathi ingaba i-motel, kodwa amanye amadoda ayemi phambi kwawo axelele abahambi ukuba "yindwendwe" kwaye ihotele ingafumaneka phantsi kwendlela.
Ukuqhubela phambili, bafumanisa isakhiwo esasidala ukuphawula "ihotele." Ngaphakathi, bafumanisa, phantse yonke into eyenziwe ngamatye anzima, kwaye kwakubonakala kungekho bungqina bokuba luncedo lwezinto ezinje njengamakhompyutha. Amagumbi abo ayengenazo iitshixo, kodwa iifestile zokhuni ezilula kunye neefestile zazingenazo zivalo kodwa zingekho iglasi.
Ngentsasa, njengoko besidla isidlo sakusasa, ezimbini iigandementi zangena zifake iingubo ezindala kakhulu. Emva kokufumana oko kwenzeka ukuba kubekho izikhokelo ezimbi kuAvignon ukusuka kumajendeni, izibini zihlawula ibhilikhi eza kufika kuma-francs angama-19 kuphela, kwaye zashiya.
Emva kweeveki ezimbini eSpanish, izibini zenza uhambo olubuyela eFransi kwaye zagqiba ekubeni zihlale zikhangeleka ukuba ihotele engabonakaliyo kodwa engabizi kakhulu. Ngeli xesha, ke, ihotele ayifumaneki. Abanye babesendaweni efanayo (babona iifasta ezifanayo), baqonda ukuba ihotele endala yayiphelile ngaphandle kokulandelwa. Iifoto ezithathwe kwihotele azizange zikhule. Kwaye uphando oluncinane luye lwabonisa ukuba amajendeni aseFransi ayegqoka iifom yenkcazo ngaphambi kowe-1905.
Ukuqala kwe-Air Raid
Ngomnyaka we-1932, intatheli yeJamani yaseJamani uBernard Hutton kunye nomlingane wakhe, umfaki-zithombe uJoachim Brandt, wabelwa ukuba enze ibali kwii-shipwards zase-Hamburg-Altona. Emva kokunikezwa ngotyelelo ngecandelo lolawulo lwee-shipyard, ezo zipapasho zeepapa zihamba xa ziva i-drone ye-aircraft ephezulu. Ekuqaleni bacinga ukuba yinto yokuqhelanisa, kodwa loo mbono yaphelelwa ngamandla xa iibhomu zaqala ukuqhuma yonke indawo kunye nokugquma kwe-firefighter kufaka umoya. Isibhakabhaka ngokukhawuleza saba mnyama kwaye babephakathi kwomoya ohlaseleyo. Ngokukhawuleza bangena emotweni yabo baza bahamba bebuya e-shipyard babuyela eHamburg.
Njengoko besuka kuloo ndawo, ke, isibhakabhaka sasibonakala sikhanya kwaye baphinde bafumanisa ngokukhawuleza, ngokusemva kwemini. Babukela emva kwii-shipyards, kwaye kwakungabikho ntshabalalo, kungekho bhobho e-inferno eyayisanda kuhamba, akukho moya kwi-sky. Iifoto zikaBritht ezithathileyo ngexesha lokuhlaselwa azibonanga nto engavamile. Kwaye kwafika ngo-1943 ukuba iBritish Royal Air Force yahlasela kwaye yabhubhisa i-shipyard - njengokuba uHutton noBritht babeneminyaka eli-11 ngaphambili.
I-Biography kaJagadish Chandra Bose, i-Polymath yamhla
Njani Izinyosi zeNyosi Zihlala zifudumele kwiHlabathi
Indlela Yokubhala Ingxelo Yencwadi Ephumelelayo
Ukuba iKhorensi yakho ifa, Ngaba ufumana i-4.0?